आउने बर्थडेमा खुसी साट्न पाउलान त प्रचण्ड ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
काठमाडौं १३ मंसिर । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आउने मंसिर २८ गते ६२ बर्ष पुरा गरेर ६३ मा लाग्नेछन् । यसअघिका दृष्ठान्त हेर्दा सायद उनी जन्मदिन मनाउने छैनन । तर संविधान संसोधनमा मधेसी मोर्चासहितका पक्षलाई सहमतिमा ल्याएर खुसी मनाउने योजना भने उनको पक्कै छ । जन्मदिन आउनुअघि नै संसोधन प्रस्ताव संसदबाट पारित गराइसक्ने ध्याउन्नमा उनी लागेका छन् ।
सशस्त्र युद्धसहित २८ वर्ष पार्टीको नेतृत्व गरेका प्रचण्डलाई यतिबेला दुई काम सम्पन्न गर्नुपर्ने अग्निपरीक्षा छ । पहिलो, सबै दलको सहमतिसहित संविधान संसोधन, दोस्रो सरकार रहँदा नै चुनाव गराएर पार्टीलाई बलियो पार्नु । तर समयले उनलाई किनारा धकेल्न थालेका दुई काम असम्भव देखिएका छन् । संविधान संसोधनको विषयलाई लिएर पार्टीचिभत्र र बाहिरबाट प्रचण्ड यतिबेला घेराबन्दीमा परेका छन् ।
प्रचण्ड निटकस्थहरुका उनसार उनी ६२ बर्षपार गर्दा ६३ चुनौतीको खातमा उभिएका छन् । केपी शर्मा ओलीबाट नेतृत्व आफुमा हस्तान्त्रण गर्दा नयाँ कामसहित त्यो भन्दा लोकप्रीयता कमाउने अभिलासा राखेका प्रचण्ड अहिले संविधान संसोधनको बाटोमा अल्झिएर लड्ने अवस्थामा पुगेको राजनीतिक विश्लेष श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमको विश्लेषण छ । ‘अहिले प्रचण्डलाई भरभन्दा डर देखाउने धेरै छन’ उनका एक सहयोगीले भने ‘कांग्रेससमेत प्रष्ट भएर नआउँदा बेलाबेला उनी झस्किने गर्छन् ।
कहिले बढी समर्थन र कहिले बढी विरोधको नाममा आफूलाई एक्लाउने प्रयास भइरहेका उनको बुझाइ छ ।’ त्यो प्रक्रिया पार्टीचिभत्र पनि देखिएको छ । प्रचण्ड अप्ठ्यारोका कारण नै सरकारले संसदमा दर्ता गर्ने भनेको संविधान संसोधनको प्रस्ताब अन्यौलमा परेको छ । शुक्रबारबाट आइतबार सकेको संसोधन प्रस्ताव आइतबारपनि दर्ता हुन सकेन । आइतबार दर्ता हुन नसकेको संविधान संसोधन अब कहिले दर्ता हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीसँग पनि जवाफ छैन ।
प्रस्तावमा सरकारले थप सहमति खोज्ने तयारी गरेको छ । मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टि, सत्तासिन दलभित्रैबाट सुरु भएको आलोचना र एमालेको आन्दोलनमा जाने चेतावनीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संसोधनमा पछि सरेको छ । प्रधानमन्त्रीका राजनितिक सल्लाहकार चक्रपानी खनालले अब मोर्चा र सत्तासिन दलमा पूर्ण सहमति गरेर संसोधन दर्ता गराउने जानकारी दिए । ‘मोर्चाले चुनावमा प्रतिवद्धता जनाउनुपर्ने र सबै घटन सन्तुष्ट हुनुपर्ने विषयमा छलफल भएपछि संसोधन रोकिएको हो ’ उनले भने, ‘अब सहमति खोजेरमात्रै संसोधन दर्ता हुन्छ आज हुन्छ भोलि नै हुन्छ भन्ने अवस्था छैन ।’
सरकार बनाउदा माओवादी केन्द्र र काग्रेससंग गठबन्धनले गरेको तीन बुदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन गराउन गठबन्धनको दबाब र सकेसम्म तीन बुदे कार्यान्वयन नहोस् भन्ने एमालेको चाहनाका बिचमा प्रधानमन्त्री अप्ठेयारोमा परेका छन् । संविधान संसोधन असफल भए आफुले पद छाड्नुपर्ने भन्दै आफ्नो अप्ठ्यारो उनले पार्टी बैठब र दलहरुको सयुक्त बैठक राखिसकेका छन् । सीमांकनका विषयमा उनी सबैभन्दा अप्ठ्यारमा परेकाले त्यसबाट पछि हड्ने संकेत पनि आइतबार दिइसकेका छन् । प्रदेश नम्बर ५ को बिषयलाई लिएर, माओवादी केन्द्र मात्रै होईन, अरु दल भित्रका बारेमा देखिएको विवादका कारण पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अगाडी बढ्न सबेका छैनन ।